Konke mayelana neTrestolone Acetate (MENT)
I-1.Yini iTrestolone Acetate (MENT)? I-2. Isebenza kanjani iTrestolone Acetate?
I-3.Izifiso zeTrestolone Acetate (MENT) Umthamo we-4.Trestolone Acetate (MENT)
I-5.Trestolone Acetate (MENT) isigamu sempilo Umjikelezo we-6.Trestolone Acetate (MENT)
Imiphumela ye-7.Trestolone Acetate (MENT) I-8.Trestolone Acetate (MENT) yokusika
I-9.Trestolone Acetate (MENT) ye-bulking 10.Trestolone Acetate (MENT) izinzuzo
Ukubuyekezwa kwe-11.Trestolone Acetate (MENT) I-12.Trestolone Acetate (MENT) powder iyathengiswa
I-13.Lapho ukuthenga i-Trestolone Acetate (MENT) powder
I-1.Yini iTrestolone Acetate (MENT)?
I-Trestolone Acetate (MENT) I-CAS 6157-87-5, eyaziwa nangokuthi i-a7 alpha-methyl-nortestosterone (MENT powder) iyi-steroid enamandla kakhulu yokwenziwa enamandla kakhulu kune-testosterone. I-steroid isetshenziselwa izinjongo zokwakha umzimba kanye nokuqeqeshwa kwamandla. Le steroid inamandla okusetshenziselwa izindlela zokuvimbela inzalo zowesilisa. I-steroid ibangela ukungasebenzi kwesikhashana emadodeni uma ilawulwa ngamanani anele.
I-Trestolone Acetate (MENT) (6157-87-5) kukholakala ukuthi inamandla okuphindwe kayishumi kune-testosterone, futhi ngenxa yalokho, ithole idumela elihle iminyaka eminingi. Ihanjiswa ngezindlela ezahlukahlukene ezifana ne-powder noma umjovo. Le steroid ilusizo ngokwengeziwe kwabazinikele okwakha izisindo zokuzinikela abafisa ukuthola imiphumela emihle ngokuhlanganisa i-steroid nama-regimen okudla kokudla kanye nezithasiselo.
I-2.Isebenza kanjani iTrestolone Acetate?
I-Trestolone Acetate (MENT) CAS 6157-87-5 isiza abakhi bomzimba ukwandisa isisindo semisipha futhi banciphise namafutha ngasikhathi sinye. Ukuthola imiphumela emihle, i-steroid ingahlanganiswa namanye amandla wokuqina ngokuqina komzimba nokusika komzimba. I-steroid ibangela ukungasebenzi kwesikhashana ngokuvimbela ukukhishwa kwe-gonadotropins gland gland.
I-steroid futhi ivimbela ukukhishwa kwama-gonadotropins, ama-follicle ashukumisayo ama-follicle, kanye ne-luteinizing hormone ngisho ngamanani aphansi. I-Follicle ivuselela i-hormone (FSH) ne-Luteinizing hormone (LH) iyadingeka enqubweni ye-spermatogenesis, inqubo evivinya ngayo ekhiqiza i-spermatozoa.
Lapho ukukhishwa kwe-LH ne-FSH kuvinjelwe, i-spermatogenesis ayenzeki. Ukucindezela i-LH kubuye kuphazamise ukukhiqizwa kwama-sperms kanye nama-curtails testosterone, ngaleyo ndlela ukungazali. I-MENT powder iyindlela eyanele yokuthatha indawo yemisebenzi eminingi encike ku-androgen. Ukubuyekezwa okujulile kwe-Superdrol (Methasterone) yokwakha umzimba
I-3.Izifiso zeTrestolone Acetate (MENT)
Ngokungafani namanye ama-anabolic steroid akweletwa ukuthandwa kwawo ngabathengisi abamnyama noma ezinkampanini ezengeza, i-Trestolone Acetate inedumela layo kwezokwelapha olusemthethweni, ucwaningo lwesayensi olwenza luthande kakhulu phakathi kwemiphakathi eyakha umzimba. I-MENT yakhiqizwa okokuqala kuma-1960s
Muva nje, iScinging, inkampani esekela abacwaningi bemithi kanye noMkhandlu Wabantu baye bathuthukisa intshisakalo yokukhiqiza le-steroid kulandela ucwaningo lwabo kule-steroid ngezinhloso zokwelashwa kokulawulwa kokuzalwa kwabesilisa kanye nokufakwa esikhundleni kwe-hormone. Lezi zinkampani zitholile izici ezihlukile nge-steroid efanelekile ukwakha umzimba. Ngaphandle kwalokho, le steroid ilusizo kakhulu ekwelashweni esikhundleni se-androgen.
Ngaphandle kokuvimbela inzalo nokuthathelwa indawo inzalo nokuthathwa kwemithi, njengokulungiselela kwe-intramuscular noma njenge-transdermal, kukhona ezinye i-Trestolone Acetate (I-MENT) isebenzisa kufaka phakathi i-hypogonadism eyinhloko, izimpandla, ukulahleka kwenqwaba yamathambo, umdlavuza we-Prostate, ukwehluleka kwe-testicular, i-BHP, i-ASIH, i-sarcopenia, i-cachexia kanye nokulimaza kwemisipha kanye nokwenza ngcono kwezemidlalo nokwakha umzimba.
Umthamo we-4.Trestolone Acetate (MENT)
Njengoba i-MENT ingazange ithengiswe njengomuthi, awukakhiqizwa othize Umthamo weTrestolone Acetate (MENT) imihlahlandlela ye-steroid. Ukuba yi-steroid enamandla kakhulu, imithamo emincane izosebenza ngokwakha umzimba. Olunye ucwaningo lukhombisa ukuthi lo muthi unamandla okuphindwe kayishumi kune-testosterone futhi ucindezela i-spermatogeneis izikhathi ezingamashumi amabili esebenza ngempumelelo kune-testosterone.
Ngenxa yalokhu, imithamo engezansi kwe-10mg (ejwayelekile i-3-16mg) ngosuku izosebenza kahle kubaqalayo abaningi. Imijovo esekwe kawoyela yalesi sidakamizwa ingathathwa cishe nge-10-20mg ngezikhathi ezithile zezinsuku ezimbili kuya kwezintathu. Abanye abantu bangabheka imithamo yemiphumela engaphezu kwe-10mg ngosuku ngemiphumela emihle ye-Trestolone Acetate (MENT) ngoba ukusebenza kahle kwezidakamizwa akufani kubo bonke abantu.
Abantu abehlukene banamazinga ahlukene wokuzwela ngezimpawu zokuqunjelwa kwezidakamizwa kanye ne-estrogenic. Imithamo ephezulu kodwa ayinconywa ngoba ingaholela emiphumeleni emibi emibi.
Abasebenzisi abanolwazi beTrestlone bangasebenzisa imithamo ye-20-50mg nsuku zonke. Kodwa-ke, lokhu kungahluka ngokuya ngohlobo oluthathwa ngalo. Isibonelo, ifomu elihlatshwayo lingaphansi kancane kunamafomu we-transdermal nawomlomo. Ezimweni eziningi, kepha lo muthi awuphathwa ngomlomo; imijovo kanye nezixazululo ze-transdermal Kunconywa njengezindlela ezinhle kakhulu zokuthatha lesi sidakamizwa. Ukuze unciphise imiphumela eseceleni ye-estrogen ne-prolactin, kuyalulekwa ukusebenzisa i-steroid ngama-prolactin inhibitors anjengeCabergoline kanye ne-aromatase inhibitor enjenge-Arimidex.
Abanye abasebenzisi abanolwazi bangathatha imithamo ye-50-75mg nsuku zonke ngomjikelezo wamaviki we-4. Labo basebenzisi kufanele bahlukanise umthamo ube izingxenye ezimbili, okungukuthi, omunye ngaphambi kokulala omunye omunye ngemuva kokuvuka. Ochwepheshe bangathatha imithamo efinyelela ku-75-100mg. Umthamo onjalo ungahlukaniswa izingxenye ezintathu, njengoba kukhonjisiwe ngezansi:
Ukusebenza kwangaphambili- 25-50mg
Ngaphambi kokulala noma ebusuku- 25mg
Indlela ebanzi iyadingeka lapho ungaphansi komthamo weTrestolone Acetate kanye nemiphumela ephumelelayo. Umuntu, Ngakho-ke, kudingeka alondoloze ukudla okuhle kokuqeda amafutha nokwengeza izicubu zomzimba. Kubalulekile ukugcina inqubo ephumelelayo yokusebenzisa kanye nokusetshenziswa okungaguquki okulandela imiphumela efanele yomthamo ibe yimiphumela ephumelelayo futhi kunciphise imiphumela emibi.
I-5.Trestolone Acetate (MENT) isigamu sempilo
I-steroid Half-life isho isikhathi esithathwe ngumzimba ukumunca umuthi futhi isuse cishe isigamu senani elithathiwe. I-Trestolone Acetate uhhafu wempilo osukela emahoreni ayisishiyagalombili kuya kwayishumi nambili (amahora we-8-12).
Ngenxa yalokhu, umuntu angaphuza lo muthi ngemithamo emincane usuku lonke, okuqinisekisa ukuthi ikhona njalo egazini. Le imithamo ingathathelwa izikhawu ezimbili kuya kwezintathu ngosuku. Ngenxa yokugxila okuhlukahlukene komuthi osegazini, kubalulekile ukuthi abasebenzisi basebenzise ukubalwa kwengxenye yesidakamizwa. Lokhu kuzosiza umsebenzisi ekuphuzeni umuthi ngemithamo efike ngesikhathi.
Uma ngokwesibonelo umuntu enquma ukuthatha i-50mg ngosuku, ngomjikelezo wamaviki amane, futhi ngaphansi komqondo wokuthi umuthi unokuphila okuyingxenye kwama-8hours, ukuhlukahluka okuhlushwa egazini kungaba ngale ndlela elandelayo:
Kuleli dosage, umuntu angathatha lesi sidakamizwa ngezikhathi ze-8-hora ze-25mg lilinye. Uma umthamo uqala ku-6 AM, okuhlushwa kuzoba yi-12.5mg ngemuva kwamahora we-8 (2 PM) lapho kuthathwa umthamo wesibili. Umthamo wesibili uqukethe i-25mg, ezothuthukisa i-37.5mg.
Amahora ayisishiyagalombili ngemuva komthamo wesibili (i-10 PM), okuhlushwa kuzoba yi-18.75mg. Amahora ayisishiyagalombili, kamuva, ayoba yi-6 AM yosuku olulandelayo, lapho kuzothathwa khona umthamo wokuqala walolo suku. Lokhu kusho ukuthi umthamo wokuqala wosuku lwesibili uzokwenziwa lapho umzimba une-9.4mg yosuku lwangaphambilini.
Iphethini elinjalo liqinisekisa ukuqina kwe-steroid egazini ngaphambi nangemva kokusebenza kwayo. Ukwazi ukubala i-Trestolone Acetate (MENT) isigamu sempilo yesidakamizwa kusiza abasebenzisi ukuthi baqiniseke ukuthi i-mkusanyiko we-umuthi uphakeme kuphela ngezikhathi ezibucayi kakhulu, ezedlule, nangemva kokuphuma kokusebenza. Ukubalwa okufanele kweTrestolone Acetate (MENT) isigamu sempilo kusiza umsebenzisi ukuphatha umthamo futhi afinyelele imiphumela emihle.
Umjikelezo we-6.Trestolone Acetate (MENT)
Abantu abehlukene bangasebenzisa imijikelezo ehlukene uma kukhulunywa ngokuthatha i-Trestolone Acetate. Lokhu kuzoncika kakhulu ekuhlangenwe nakho komuntu nomuthi. Umuntu kufanele futhi aqonde imithelela yomjikelezo abangena kuwo, kuya ngezinhloso nezinhloso zabo ngaphambi kokuzibophezela kunoma yimuphi umjikelezo.
Uma ungena emjikelezweni, kubalulekile ukucabanga ngobude bomjikelezo kanye nokuxakaniseka komuthi osegazini kuwo wonke umjikelezo. Ngemigomo esungulwe kahle, kulula ukukhetha efanele kakhulu Umjikelezo weTrestolone Acetate (MENT) ukuzinikela ku. Nge-Trestolone Acetate, kungenzeka ukuthola imiphumela ebalulekile ngisho nomjikelezo wamasonto amabili. Kodwa-ke, umjikelezo ofanele kakhulu kufanele uqhubeke amasonto amane kuya kwayisithupha. Lokhu kungumjikelezo ofanele ngoba kuvimbela umuntu ekuphakamiseni umthamo wabo.
Imiphumela ye-7.Trestolone Acetate (MENT)
I-Trestolone Acetate iyi-steroid enamandla kakhulu eye yathola ukuthandwa ngemiphumela yayo enamandla. Enye yezinto, kungani abantu abaningi bebheka le steroid, kungenxa yemiphumela yayo esebenzayo etholakele ngesikhathi esifushane kakhulu. Umuthi unomphumela onamandla kubantu abafuna ukuthola amandla okushesha.
Abaqalayo abasebenzisa lesi sidakamizwa bangathola imiphumela ebonakalayo ngisho esifushane njengamasonto amabili ngaphandle kokubekwa. Ngokuphatheka kwayo okuphezulu, abasebenzisi bangathola inzuzo emangalisayo yemisipha nemiphumela yokulahlekelwa isisindo noma ngemithamo emincane ye-3-6mg. Imiphumela yokuqina kwemisipha nayo ihlala isikhathi eside, okwenza abasubathi nabasindayo besisindo babheka kakhulu lesi sidakamizwa.
Abantu abavamile ngaphandle kwabakhi bomzimba bangasebenzisa futhi lesi sidakamizwa ukufezekisa umzimba ohehayo. Le miphumela ingathuthukiswa ngokugcina ama -out omzimba omuhle nokudla ngendlela efanele. Umuthi unikeza abasebenzisi amandla amaningi ukusebenzisa, okudinga ukuthambekela okuphakeme.
Amandla we I-Trestolone i-Acetate powder ukucindezela ukukhishwa kwe-steroid ukulawula inqubo ye-spermatogeneis kwenza umuthi ube wusizo ekulweni nokulawulwa kokuzalwa kwabesilisa kwabesilisa.
I-8.Trestolone Acetate (MENT) yokusika
I-Trestolone Acetate inikeza umuthi onenzuzo kubantu abanesifiso sokusika. Ukusikwa kwe-Trestolone Acetate (MENT) kunika amandla abaphakamisa izisindo kanye nabakhi bomzimba ukunciphisa amafutha amaningi emizimbeni yabo ngaphandle kokuthi babe nobunzima obukhulu emisipha yabo. Ukufinyelela isisindo esinciphile ngomzimba omuhle, i-Trestolone Acetate ingasetshenziswa kanye nezinye izidakamizwa ukuthuthukisa imiphumela kumjikelezo wokusika we-Trestolone Acetate (MENT) ngokuya ngemiphumela efiselekayo kanye nokuzwela komuntu nokuqina kwe-oestrogenic.
Ukusika izigaba zeTrestolone, umuntu angakwazi ukufaka i-Winstrol ngama-androjeni angenawo ama-aromatizing njengeHalotestin noma i-trenbolone. Inhlanganisela enjalo izosiza umuntu ukuthi afinyelele encazelweni eqinile yomzimba nokuqina kobuduna izakhi eziningi zomzimba ezifisa ukukufeza. Abantu abanokuzwela okuphezulu bangacabanga ukungeza amakhompiyutha anjenge-Deca-Durabolin, i-Equipoise noma i-primobalin lapho kufakwa i-Trestolone acetate.
I-9.Trestolone Acetate (MENT) ye-bulking
I-Trestolone nayo ingagcotshwa namanye ama-steroid ngobuningi. I-Trestolone Acetate (MENT) i-powder bulking kuhloselwe abantu abafuna ukhulisa izinzuzo zemisipha, njalo ngokuqeqeshwa okuphikelelayo nokuhlelekile kanye nokuzivocavoca. Kakhulu, imizamo yokunciphisa amafutha omzimba ingahle iholele ekuqeqesheni ihaba okungaholela ekulahlekelweni yimisipha. I-Trestolone, uma ihlanganiswe nama-steroid afanele, ingenza kube lula ukuthi umuntu alahlekelwe ngamafutha omzimba, alondoloze futhi enze lula ukutholwa kwemisipha yemisipha futhi wenze umzimba ube namandla namandla okubekezelela ukusebenzisa kakhulu nokuqina.
Ukuxhaphaza kwesinye isikhathi kungaba nzima kakhulu kubantu abafuna ukuthola imiphumela esheshayo ngesikhathi esifushane kakhulu. Imijikelezo enkudlwana enjalo inganika umsebenzisi inani elilinganiselwe lokufaka, okubandakanya ukugcinwa kwamanzi. Le miphumela, noma kunjalo, ingahlali isikhathi eside. Amanye ama-steroid angafakwa uphawu nge-Trestolone Acetate (MENT) ngomjikelezo wobuningi afaka i-Dianabol, Anadrol, neTrenbolone.
I-Dianabol ingelinye lama-steroid elibhekwe kakhulu ngobuningi bawo ukuthi lingakwazi ukwenza okuthile ngokushesha futhi linikeze izinzuzo ezisheshayo esikhathini esifushane. I-Stacking Trestolone ene-Dianabol ingahle ifike kumaphawundi we-20 wesisindo semisipha emavikini e-6. I-Dianabol nayo inenzuzo ngoba inenqwaba yabantu abaxinene nabangabazi ngaphandle kwemijovo.
I-Deca-Durabolin, eyaziwa nangokuthi yiNandrolone, isetshenziselwa ukuxhaphaza abantu abafuna ukuphulukiswa okuhlanganyele nokuvuselela izicubu zomzimba. Kuyasiza futhi nasekwelapheni umjikelezo wokwelapha ngoba unciphisa ukusetshenziswa kwamandla. Le steroid inemiphumela emincane esezingeni eliphansi futhi ingahle isetshenziswe kanye nama-androgenic steroid anjenge-Dianabol.
I-Trenbolone inamandla alinganayo ne-potency futhi isetshenziselwa umjikelezo we-bulking we-lean body physique as to cut. Yize inamandla aphezulu, kungenzeka kungabi yinzuzo kubakhi bomzimba osindayo abalungiselela umncintiswano. Ingafakwa, kepha, kufakwe kunoma yimuphi umjikelezo wobuningi.
10.Trestolone Acetate (MENT) izinzuzo
I-Trestolone acetate igqamile emakethe ngenxa ye-potency yayo eye yaqinisekiswa abahlaziyi bezokwelapha futhi neyaziwa ngokuqina kwekhwalithi yayo. I-Trestolone acetate inezinhlobonhlobo ezahlukahlukene zezinzuzo, ikakhulukazi kubantu abafuna ukuphelelisa umzimba wabo kanye nokufinyelela umgomo wabo wokuqina. Kuyinto ephezulu kakhulu enconywayo yokusiza ukuthuthukiswa kwemisipha kanye nokunciphisa umzimba. I-steroid ivumela abasebenzisi bayo ukuthi bathole umzimba onciphile, ohlonishwayo ngenzuzo enkulu yemisipha. Ezinye eziphambili Izinzuzo zeTrestolone Acetate (MENT) ezihambisana ne-Trestolone acetate zifaka:
I-Trestolone acetate yaziwa ukuthi isebenza ngokushesha kunamanye ama-steroid. I-Trestolone acetate iletha imiphumela ngokushesha ngemuva komjovo. Abasebenzisi babike ushintsho oluphawuleka emisipheni yomzimba ngemuva kokuphuza umuthi. Ngokumangazayo, imiphumela yayo ihlala isikhathi eside, futhi abasebenzisi akudingeki bakhathazeke ngokuzijovela kabusha ukuze balondoloze izicubu zabo. Umuthi uletha umphumela we-myotopic we-testosterone ophindwe izikhathi eziyishumi okwenza ukwenyuse isilinganiso sawo sokwakha izicubu eziphakeme kunanoma iyiphi enye i-steroid emakethe.
I-Trestolone acetate ingasetshenziswa njengesidakamizwa esihlukile sokusika futhi amakhono ayo okwenza ukusika athuthukiswa kakhulu. Umuthi unezinto ezihlukile njengokufakwa emgqeni namanye ama-prohormones asiza ekuthuthukiseni umjikelezo wokusika, ngaleyo ndlela esebenza kangcono kumuntu ofuna ukususa izicubu zomzimba futhi ashise namafutha.
· I-Trestolone acetate ifakazele ukuthi iyasebenziseka emjikelezweni we-bulking. Le mishanguzo ivumela umsebenzisi wayo ukuba abe namazinga aphezulu okugcinwa kwe-nitrogen okubasiza ukuthi bakhuthaze ukwakheka kwezicubu. Umuthi ubuye uthuthukise abakhi bomzimba balondoloze isimo se-anabolic semizimba.I-Ultimate Guide ku-Nolvadex yokwelapha umdlavuza webele
Ukusetshenziswa kweTrestolone acetate kwandisa amandla omzimba wokuqamba amaprotheni. Ngenxa yalokhu, umuthi uletha ukukhula okusheshayo kwezicubu zomzimba ngoba amaphrotheni asebenza njengezakhi zomzimba.
· Umuthi uphakamisa nezinga lamandla. Ukunyusa izinga lamandla kusiza abasebenzisi ukuthuthukisa amandla okuqeqeshwa ngokuqina nangaphezulu. Ngaphezu kwalokho, ukukhuphula amandla amazinga kusiza abakhi bomzimba banciphise amakhefu abo, okwenza ukuthi basebenze kaningi.
· Ngokungafani nezinye izidakamizwa, trestolone Acetate akaguquki ku-estrogen. I-estrogen inemiphumela elimazayo emzimbeni womuntu, njengokubanga ukungasebenzi kahle kwe-erectile, ukukhathala kanye nokuncipha kwemisipha. Kodwa-ke, i-MENT yake yenziwa idlala indima ye-testosterones emzimbeni wabasebenzisi futhi ngaleyo ndlela igcine imiphumela emibi ye-estrogen.
· Futhi, ngokungafani nama-steroid amaningi, umuthi awuguquli ku-DHT. Futhi, i-steroid inyuse i-potency njengoba ayihlanganisi ne-sexbulin (SHBG) yocansi.
I-11. Ukubuyekezwa kweTrestolone Acetate (MENT)
I-Trestolone Acetate ibilokhu yaziwa njenge-anabolic steroid enamandla kakhulu futhi ephumelelayo. Abantu abaningi basebenzise izidakamizwa zokwakha umzimba zeTrestolone Acetate zokwakha izicubu zokwakha izicubu kanye nezinjongo zokwelashwa. Abantu abanjalo bazwakalise ukwaneliseka kwabo ngomuthi ngezibuyekezo zabo ezinhle zamakhasimende. Okulandelayo okunye kokubuyekezwa komsebenzisi okubhalwe abasebenzisi abanjalo:
U-Nick ungumakhi womzimba we-27 oneminyaka engu-ubudala futhi ungumsebenzisi we-Trestolone powder okwakha umzimba. UNick usebenzise lo mkhiqizo izinyanga eziyisishiyagalombili, futhi ujabule ngemiphumela. Uthi umuthi umnikeze imiphumela eqondile njengoba efisa. UNick uyaqhubeka nokuthola isisindo semisipha emangalisayo ngaphandle kwemiphumela emibi. Uyajabula ukuthi umuthi awuzange umnikeze ukulahleka kokudla, ukuguquguquka kwemizwelo. Inkinga okuyiyo kuphela uNick ahlangabezana nayo ngale steroid ukujuluka kobusuku nokuqwasha okuthile. Njengoba esengumakhi womzimba we-veteran, uNick wasetshenziswa ezinhlangothini ezinje futhi wangabathola bezicindezela.
UGreg ngomunye umsebenzisi ojabulayo weTrestolone yokwakha umzimba. UGreg ubesebenzisa lesi sidakamizwa futhi njengamanje umjikeleza umjikelezo wakhe wesibili ngemuva kokwelashwa komjikelezo wasemuva. Emjikelezweni wakhe wesibili, ubelokhu eyisibalo, futhi imiphumela mihle kakhulu. UGreg uhlela ukuqala ukusika ngokushesha nje lapho eqeda kulo mjikelezo. UGreg uthi ekuqaleni wayekholelwa futhi wayesaba ukuthi umuthi uzoba nemiphumela emibi emzimbeni wakhe. Kwamangaza ukuthi lesi sidakamizwa sesiphenduke saba enye yama-steroid amahle kakhulu ake awasebenzisa. Umuthi umnikeze amandla aphezulu, umzimba omuhle kakhulu, futhi umenze wakwazi ukwakha izicubu ezinkulu. UGreg uyaziqhenya kakhulu ngalo muthi futhi uthi angawuncoma noma ngubani.
UClinton uzizwa ethintekile ukuxoxa ngamava akhe neTrestolone Acetate ngemiphumela emihle ayitholile esikhathini esifushane nemithamo emincane yalesi sidakamizwa. UClinton akayena ophakamisa isisindo noma ongakhi umzimba kepha ungumqambi wemfashini onothando lomzimba omnandi nokuqina komzimba. Usebenzise lesi sidakamizwa cishe unyaka owodwa, futhi ujabule kakhulu ukuthi ngaphandle kokuthola izicubu zomzimba onomzimba omuhle, umuthi futhi umsize ukuba athuthukise isikhumba se-libido, inempilo kanye nesikhumba esibushelelezi. Umuthi futhi umsize ukuthi wehlise amafutha omzimba, okumjabulisa kakhulu. UClinton uhlose ukuqhubeka nokusebenzisa lesi sidakamizwa ngoba akanaso futhi unezinkinga naso.
I-12.Trestolone Acetate (MENT) powder iyathengiswa
Abakhiqizi beTrestolone Acetate baqinisekisile ukuthi umkhiqizo usezingeni eliphezulu. Kodwa-ke, kunabantu abaningi emakethe yabamnyama namalebhu angaphansi komhlaba abathengisa umkhiqizo osezingeni eliphansi namanani aphansi. Ukudla i-Trestolone Acetate esezingeni eliphansi kungahle kube nemiphumela emibi efana nomdlavuza wendlala yesinye. Ngakho-ke, abathengi kanye nabasebenzisi balo mkhiqizo kudingeka baqaphele ngenkathi bethenga I-Trestolone Acetate (MENT) i-powder iyathengiswa.
Ngenxa yokuthandwa kwayo nokwanda kwesibalo sabantu abathanda futhi abafuna ukufeza ukuqina ngokomzimba, umuthi utholakala ezindaweni ezahlukahlukene. Inzuzo eyengeziwe yesidakamizwa ukuthi iyatholakala ngentengo enhle kunamanye ama-steroid. Abathengi abafuna ukuthenga i-powder ngobuningi ukufinyelela umkhiqizo ngenani eliphansi. Umkhiqizo uthengiswa ngezinhlobo ezimbili, okungama-pure pure axutshwe ku-100mg / ml kanye ne-99% pure Trestolone Acetate powder.
I-13. Ungayithenga kuphi i-Trestolone Acetate (MENT) powder
ITrestolone Acetate iyatholakala kubathengisi bamazwe omhlaba abatholakala ezindaweni ezahlukahlukene emhlabeni jikelele njenge China, United States, Canada, Brazil, neMexico. Abathengisi bamazwe aphesheya benzile ukuthi lesi sidakamizwa sitholakale kumawebhusayithi abo ukuze abathengi basithenge emapulatifomu abo.
Futhi, unga futhi thenga i-Trestolone Acetate (MENT) powder kusuka kwamanye amasayithi aku-inthanethi ngamanani afanele, Umuntu angathenga neTrestolone Acetate (MENT) ngobuningi kubathengisi bendawo kepha uxwayiswa ngokuthi uhlole ikhwalithi ngenkathi uthenga umkhiqizo osendaweni njengabamangaleli sekugcwele imakethe. Abathengi bavame ukucelwa ukuba bathenge umkhiqizo kumawebhusayithi ezinkampani asunguliwe kunokuthola eminye imithombo eku-inthanethi, futhi Umphakeli weTrestolone Acetate (MENT) ukuqinisekisa ukuthi bathola umkhiqizo osezingeni.
I-Trestolone ithole idumela elithembeke kakhulu ekwakheni umzimba nakwezinye izinjongo zezokwelapha, njengokuvimbela inzalo yowesilisa. Lesi sidakamizwa sihlala siyi-steroid enamandla kunazo zonke emakethe ngokuthandwa kwayo okufaniswa ne-potency yayo ephezulu. Lesi sidakamizwa sinezinzuzo eziningi kubasebenzisi, futhi siwusizo kakhulu. Abasebenzisi balesi sidakamizwa kufanele babheke amashejuli abo omthamo, ukubalwa kwengxenye yempilo, kanye nokugcina ukusebenza njalo nokudla okufanele. Uma ufuna ukuthenga iTrestolone yokwakha umzimba, ungavakashela iwebhusayithi yelas.com ukubeka i-oda lakho futhi ubuze eminye imininingwane.
I-1. UDrake Ellen, uDrake Randy; I-Saunders Pharmaceutical Word, (2006) p.682
I-2. Ama-Elks; Isichazamazwi Sezidakamizwa; Idatha yamakhemikhali: Idatha yamakhemikhali, Izakhiwo, kanye ne-bibliography. (2014) p.538, 588
I-3. Legato Marianne; Imigomo ye-Gender-Specific Medicine, (2009) p.363
I-4. UYalkowsky uSamuel, u-Yan Yan, uJain Parijat; I-Handbook of Aquhite Solubility Idatha, (2016) P. 1567
I-5. UZayas Hilda; ISpecial Chemical & Pharmaceutical Glossary, (2005). P. 268